Toekarena: Fandraharahàm-Behivavy Miasa Ho An’ny Fampandrosoana Afrikàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2015 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Español, Français
Sary an'i Jran Maaswinkel (@JeeeM)
Voamarik'ireo taham-pitomboan'ny toekarena sy ny toekarena iray tsy mitsaha-mivelatra, miezaka misarika ireo mpampiasa vola sy ireo renivola avy any ivelany ny tanibe Afrikana. Hatrany hatrany ireo fiarahamonim-pirenena, ary indrindra fa ny vehivavy, dia maniry ny handray anjara amin'izany fitomboana izany amin'ny alàlan'ny fifanentanana avy amin'ny fandraharahàna. Ary tsy vitsy ireo ohatry ny fahombiazan'ny tsirairay na ny fikambanana.
Volana vitsivitsy lasa izay, ny tranon-kevitra Terangaweb, sampan-draharaha mahaleotena mipetraka ho toy ny ambohipihaonan'ireo “hevitra ao Afrika”, dia namoaka ny filaharana ho an'ireo afrikana tanora 30 mpandraharaha mila arahana maso. Manana ny saina ilaina amin'ny fandraharahàna sy fahavononana hiasa mivaingana, manangana tetikasa miaraka aminà famoronana vaovao ireo tanora ireo, mazàna no natao hamaly ny filàna mivantana sy ny fanirian'ny vahoaka afrikàna. Anatin'izy ireny ny vehivavy, ary indrindra fa ilay vehivavy Nizeriana, Ola Orekunrin, mpitsabo sy mpanorina ny orinasam-piaramanidina voalohany fitondràna marary ao andrefan'i Afrika. Ndeha koa hotanisaintsika ilay vehivavy Afrikana Tatsimo, Rapelang Rabana, namorona ny Yeigo Communications, orinasa tanora mamokatra ireo tolotra fandefasana hafatra eo noho eo. Ankoatra izany, tsy mitsaha-mitombo maka toerana any amin'ireo firenena afrikàna marobe ny fironana ho amin'ny fandraharahan'ny vehivavy, ary amin'ny tranga maro, dia tohanan'ny fanjakàna.
Toy izany koa no mitranga ao Côte d'Ivoire, toerana izay nanombohan'ny Vadin'ny Filoha , Dominique Ouattara, ny Tahirimbola ho Fanohanana ny Vehivavy ao Côte d'Ivoire (FAFCI). Ity hetsika ity dia mikendry ny hampiroborobo ny fandraharahàn'ny vehivavy ao amin'ny fireneny amin'ny alàlan'ny fampisamborana vola amin'ny zanabola faran'izay ambany, hahafahan'ireo vehivavy ivoariana manana renivola hiaingàna mba hanaovana asa matianina. “Nahafahan'ny vehivavy miisa 100.000 nanana velontena ny FAFCI “ hoy i Dominique Ouattara nanamafy, tamin'ny fampahatsiahivana ny tomban'ilay rafitra. Ny Banky Iraisampirenena ihany koa dia mandrisika ny fampifanarahana ny asa fandraharahàna amin'ny vehivavy afrikàna, amin'ny famokarana rafitra iray fampisamborana vola ho an'ny rehetra sy fametrahana tohana teknika. Ao anatin'ny sosokeviny, amporisihan'ny Banky Iraisampirenena koa ny fampivoarana ny fanabeazana fototra, ambaratonga faharoa ary ny fampianarana ambony ho an'ireo ankizivavy afrikàna, fomba iray tsara indrindra ho an'ny vehivavy hahazoany fitaovana famokarana na ihany koa fiarovana araka ny lalàna sy fanohanana misimisy kokoa.
Rebecca Enonchong – CC-BY-20
Mbola mitàna anjara eo ihany indray ny fiarahamonim-pirenena. Ireo fikambanana sasany, toy ny “Oser l'Afrique“, dia manoso-kevitra ny hanaovana fihaonambe momba ny fandraharahan'ny vehivavy, mba handrisihana azy ireo hirotsaka sy hampiasa vola, izay mazàna lasa ohatra amin'ny fahombiazan'ny asa atao sy ireo tetikasa mivaingana. Toy izany ny an'i Rebecca Enonchong, izay nahazo loka natolotry ny Forbes sy ny World Economic Forum, mpamorona ny “Africa Technology Forum” (Sehatra Fifanakalozana momba ny Teknolojia Afrikana), fikambanana tsy mitady tombony ara-bola naompana ho amin'ny fampiroboroboana ny fandraharahàna, indrindra fa momba ny teknolojia vaovao sy ny fampivelarana ireo ‘startups’ an'ny tanora afrikàna manokan-tena ho amin'ny TIC (teknolojian'ny Fampahalalam-baovao sy ny Fifandraisana). Iray hafa nasaina i Céline Victoria Fotso, mpampiroborobo ny “Je Wanda Magazine”, izay ny tanjony dia ny hanome sary vaovao ho an'i Afrika. Lavitry ny ady, ny fahantràna sosialy sy toekarena ary ny tsy fahamarinan-toerana politika izay zavatra diso matetika no iraisana raha vao miresaka ny tanibe afrikàna, mampiroborobo ny Afrika tanora, feno tsiky ary indrindra fa manana talenta, ilay gazetiboky.
Saingy tsy ho voafetra ho amin'ny resaka teknolojia vaovao ihany ny fandraharahàn'ny vehivavy ao Afrika, na atokana ho an'ireo vehivavy nahazo diplaoma sy/na nandia kilasy ambony. Ny mifanohitra amin'izany aza, toa tsy maintsy mitombo eo anivon'ny fiarahamonina afrikàna ny toepanahin'ny fandraharahàna. Izany no zotra arahan'ny FAFCI an'i Dominique Ouattara, izay mirona araka izany hikasika ireo sokajim-behivavy ivoariana rehetra, manao ny karazana asa samihafa, ahitàna ny zava-misy isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fihariana. Raha, any rehetra any manerana an'i Afrika, mila mivoatra ireny tetikasa ireny, dia tsy maintsy mivady amin'ny politkan'ny firotsahana an-tsitrapo atosiky ny fanjakàna amin'ny asa mivaingana ataon'ny fiarahamonim-pirena iray, maniry ny handray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny tanibe. Tsy kely ilay fanamby, nefa tsy afaka ny tsy hijery ireo mpandraharahany ny tanibe afrikàna.
7 andro izayNizeria